तपाईलाई के लाग्छ सरकारको आदेश निषेधाज्ञा उलंघन गर्नेलाई नेपालमापनि यसै गर्न जरुरी छ ? - Nepali in Australia
तपाईलाई के लाग्छ सरकारको आदेश निषेधाज्ञा उलंघन गर्नेलाई नेपालमापनि यसै गर्न जरुरी छ ?
May 27, 2021 autherLeaveaComment on तपाईलाई के लाग्छ सरकारको आदेश निषेधाज्ञा उलंघन गर्नेलाई नेपालमापनि यसै गर्न जरुरी छ ?
काठमाडौ । अहिले विश्वभरी नै स्वास्थ्य र अर्थव्यवस्था निक्कै चुनौती बनेको छ । कसैलाई रोगबाट बच्न कठिन छ कसैलाई रोग र भोक दुबैबाट बाँच्न कठिन छ । कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा देखा परेपछि यसले विश्वनै तहसनहस पारेको छ । यसले अझै मानव जातिलाई अपूरणीय रूपमा क्षति पुर्‍याउने सम्भावना रहेको छ।
अपूरणीय क्षति नपुगोस् भनेर राज्यले विश्वभरी कडा निषेधाज्ञा गरेको छ । तर नेपालमा जस्तै विश्वभरी नै सरकारको आदेश उलंघन गर्नेहरुको संख्या उच्च छ । यही सन्र्दभमा अहिले पाकिस्तानको एउटा तस्बिर भाइरल बनेको छ ।
निषेधाज्ञाको आदेश उलंघन गर्नेलाई प्रहरीले जे गर्यो त्यो निक्कै भाइरल बनेको छ । अटेर गर्नेहरुलाई आफ्नो देशमापनि यसै गर्नुपर्ने रायका क्याप्सन लेखेर हरेक देशमा यो तस्बिर सेयर भइरहेको छ । तपाईलाई भने के लाग्छ के नेपालमापनि यस्तै जरुरी छ ?